Fisorohana fanakorontanana :: Nahitsy ny fifehezana an’ireo fandaharan’ny haino aman-jery • AoRaha
Fisorohana fanakorontanana Nahitsy ny fifehezana an’ireo fandaharan’ny haino aman-jery
Mitoetra ny fandrarana ny fandefasana fandaharana mety hiteraka korontana sy hanohintohina ny filaminam-bahoaka amin’ny haino aman-jery, araka ny didimpitondrana navoaka tamin’ ny anaran’ireo minisitera maromaro. Taorian’ny fanaovan’ireo haino aman-jery taratasy fanekena ny tsy hivoizana vontoatin-dresaka mety hanakorontana no nanafoanana ny fanapahankevitra ny fampiatoana tanteraka ny fandefasan’ireo fandaharana maromaro ireo, afak’omaly alina.
“Afaka miverina mandefa ny fandaharany eo ampanajana ny taratasy fifanekena nataon’izy ireo teny amin’ ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina ireo onjampeo sy ny fahitalavitra voatanisa tamin’ny fanapahankevitra niraisan’ireo ministera teo aloha”, hoy ny andininy faha-4 ao amin’ilay fanapahan-kevitra vaovao, nivoaka afak’omaly.
Araka izany, dia tsy mitombina na manana antompisiana intsony ilay fitarainana nalefan’ny Holafitry ny mpanao gazety teny amin’ny Filankevi-panjakana, izay nanohitra sady nangataka ny fampiatoana narahina fitakiana ny fanafoanana an’io didim-pitondrana iraisan’ny minisitera io, araka ny fanazavan’i Clément Jaona, filohan’ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara sady mpitsara eo anivon’ny Filankevi-panjakana.
Fivorian’ny Antenimierampirenena :: Hampiasana teknôlôjia ny tsangantanan’ireo depiote